"Actual Madrid Waxay Ahayd Gurigayga, Mana Doonayn In Aan Ka Tago..." – Axadle
“Actual Madrid Waxay Ahayd Gurigayga, Mana Doonayn In Aan Ka Tago…”
Difaada midig ee reer Morocco ee Achraf Hakimi ayaa qirtay in uu doonayay in uu sii joogo Actual Madrid oo uu booskiisa u dagaallamo xagaagii tegay, markaas oo ay kooxda reer Spain ka iibisay Inter Milan oo uu shalay kula guuleystay horyaalka Serie A.
Actual Madrid ayaa xagaagii waxay Achraf Hakimi kaga iibisay Inter Milan lacag dhan €40 milyan oo Euro kaddib saddex sannadood oo uu amaah kaga maqnaa Santiago Bernabeu, waxaana wararkii waqtigaas oo baxay ay sheegayeen in laacibkani uu ka dalbaday kooxda in boos uu ka ciyaaro oo aanay cidina ku qabsanin la siiyo haddii kalena la fasaxo.
22 jirkan ayaa markii ay xalay kooxdiisu ku guuleystay hroyaalka Serie A, waxa uu waraysi siiyey warbaahinta reer Spain ee El Chringuito, waxaana uu caddeeyey in aanu marnaba doonayn in uu ka tago Actual Madrid, isagoo yidhi: “Waa in aan caddeeyo. Dadku waxay sheegayaan in aanan anigu doonayn in aan sii joogo oo aan u tartamo booskayga, laakiin sidaas maaha.
“Qof kastaaba wuu ogyahay in Actual Madrid ay tahay gurigayga oo aan jeclaan lahaa in aan u ciyaaro, laakiin waxaan filayaa in duruufo kala duwan ay kooxda ku riixeen in ay gaadho go’aan kale.
“Qof walba wuu ogyahay in aan jeclaan lahaa in aan halkaas joogo oo aan ku guuleysto booskayga. Dadku approach hadlaan laakiin ma oga xaqiiqada.